आज आइतवार कस्तो छ तपाँइको भाग्य ? हेर्नुस् राशीफल::Nepalese News Portal
आज आइतवार कस्तो छ तपाँइको भाग्य ? हेर्नुस् राशीफल
आज वि.सं. २०७५ साल चैत्र २३ गते आइतबार तदनुसार सन् २०१९ अप्रिल ५ तारिख । हेर्नुस् आजको राशिफल ।
मेष राशी हुनेहरुको आज आम्दानीको नयाँ स्रोत फेला पर्नेछ । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ मिल्ने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा फाइदा छ । पितृधनको विशेष उपयोग हुनेछ । आयआर्जन बढ्नेछ । उठ्नुपर्ने रकम हात लाग्नेछ । रोकिएका काम बन्नेछ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग हलुका रातो अंक रहेको ५ रहेको छ ।
वृष राशी हुनेहरुको आज उत्साह र जाँगरमा कमी आउनेछ । लगानी र श्रमको मूल्य नपाइने समय छ । समयमा होसियार बन्न नसक्दा खर्चको मात्रा बढ्नेछ । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनेछ । प्रयत्न गर्दा पनि उपलब्धि उठाउन मुस्किल पर्नेछ । साना गल्तीले ठूलो विवादमा परिनेछ । सचेत हुनुहोला । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग गाढा पहेलो वा बुट्टे र अंक रहेको ८ रहेको छ ।
मिथुन राशी हुनेहरुको आज रोकिएका काम बन्नेछ । नयाँ जिम्मेवारी हात पर्नेछ । महत्कांक्षीय योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । प्रतिष्ठित काम गर्ने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने समय छ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । व्यापारमा राम्रो फाइदा छ । आमाको सहयोग र मातृधनबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । यस राशी हुनेहरुका आजका लागि शुभ रंग सेतो वा सुन्तले र शुभ अंक ७रहेको छ ।
यस राशी हुनेहरुको आज प्रयत्न गर्दा समयको सदुपयोग हुनेछ । आस मारेको फल पुनः प्राप्त हुनेछ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । नयाँ काम शुरु गर्ने समय छ । साना प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ । यस राशी हुनेहरुका आजका लागि आज शुभ रंग नीलो र शुभ अंक ६ रहेको छ ।
सिंह राशी हुनेहरुलाई आज मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । फजुलको यात्रा र घुमघामको समय छ । गरेका कामको सर्वत्र आलोचना हुन सक्छ । तर आत्मविश्वास र हिम्मतका साथ काम गर्दा कीर्तिमानी काम सम्पादन हुनसक्छ । कडा मिहिनेछ पछि भने कर्मयोग र आम्दानीले पछ्याउनेछ । यस राशीका लागि आजको शुभ रंग बैजनी वा पहेलोे र शुभ अंक १ रहेको ।
कन्या राशी हुनेहरुका लागि आज काममा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । लेनदेनमा विवाद आउन सक्छ । आर्थिक रुपमा नोक्सानी हुनसक्छ । कामको उचित मूल्यांकन हुन सक्दैन । प्रयत्न गरेको काम समयमा सकिदैन । विभिन्न चुनौतीको सामाना गर्नुपर्नेछ । इच्छाशक्ति जागे पनि चाहाना पूरा हुँदैन । यस राशीका लागि आज शुभ रंग ध्वासे र शुभ अंक ४ रहनेछ ।
यस राशी हुनेहरुका लागि आज आत्बल र उत्साहमा वृद्धि हुनेछ आँटेका काममा सफलता मिल्नेछ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदाको योग छ । आम्दानी बढ्ने र फाइदा उठाउने समय छ । वैदेशिक यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । पुरानो लेनदेन र बाँकी बक्यौताको समस्यालाई हल गरिने छ । कामको चाप बढ्ने छ, तर बेफाइदा हुँदैन । फाइदाका लागि योजनाहरु गोप्य राख्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी र राज्यपक्षको काममा सफलता मिल्नेछ । यस राशीका लागि शुभ रंग सुन्तले र शुभ अंक ३ शुभ रहनेछ ।
वृश्चिक राशी हुनेहरुको आज भविष्यका काममा जग बसाउने समय छ । मातृधन र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिनेछ । पुशधन र जमिनबाट पनि फाइदा नै छ । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा फाइदा समय छ । आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ । हतारमा गरेको निर्णयले क्षति हुनसक्छ यसकारण महत्वपूर्ण काममा अनुभवीको सल्लाह लिनुहोला । यस राशीलाई आज शुभ रंग छिर्केमिर्के बुट्टे शुभ अंक २ रहेको छ ।
धनु राशी हुनेहरुका लागि आज समुदायको हितमा राम्रो काम गर्ने समय छ । सामाजिक काममा प्रतिष्ठाको कमाउनुको साथै फाइदा लिने समय छ । नयाँ काम र जिम्मेवारी हान पर्नेछ । किर्तीमानी काम गर्ने योग छ । आँटेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा मिल्नेछ । आर्जित धनको दिर्घकालिक उपयोग हुनेछ । यस राशी हुनेहरुको आजका लागि शुभ रंग गाढा हरियो र शुभ अंक ५ रहेको छ ।
मकर राशी हुनेहरुका लागि आज बनिसकेका काम बिग्रन सक्छ । सचेत हुनुहोला । काम र जिम्मेवारीमा कमी आउनेछैन । काममा लगानीको समय छ । श्रमको मूल्य कमै मात्र पाइनेछ । आशा देखाउनेहरुले धोका दिन सक्छ । व्यवसायिक कामा खर्च बढ्ने र काम पूरा नहुनाले दिक्क लाग्नेछ । आज होसियारी पूर्वीक काम गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रबा भने लाभ लिन सकिन्छ । यस राशीका लागि शुभ रंग गाढा रातो र शुभ अंक ८ रहेको छ ।
यस राशी हुनेहरुको आज परोपकारी कामबाट नाम, दाम र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिनेछ । रोकिएका काम सुरु गर्ने समय छ । आर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दिर्घकालिक प्रयोजनमा उपायोग हुनेछ । नचिताएको ठाउँबाट धनलाभको संकेत छ । सम्पत्ति लाभ गर्न अनुकूल प्रयास हुनेछन् । साझेदार वा सहयोगीको संगतले फाइदा हुने काम गरिनेछ । दिनचर्या व्यस्त हुनेछ । दुरदराजबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । यस राशीका लागि आज शुभ रंग गाढा हरियो र शुभ अंक ७ रहेको छ ।
यस राशीका हुनेहरुको आज केही अर्च लागे पनि सोचेअनुसार वैदेशिक काम बन्नेछ । प्रयत्न गर्न धन आर्जन गर्न सकिनेछ । मनपर्ने भौतिक वस्तु जोडिनेछ । आँटेको काममा सफलता मिल्नेछ । आजको प्रयास र कामबाट दिर्घकालिन फाइदा पुग्नेछ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग सेतो वा उज्यालो र शुभ अंक ६ रहेको छ ।
लुटेरालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलायो गोलि
काउसिन्ल विधेयकका विरुद्ध पत्रकारहरुको रुवाबासी